Kalpulli Yaocenoxtli, koox dhaqameed Mexica-Nahua (Aztec). Sumcada sawirka: Kimani Beard
Iskaashi lala yeesho Roots -ka asaliga ah wuxuu fidiyaa Barnaamijka Farshaxanka Farshaxanka
Mu'asasada McKnight iyo Xarunta Farshaxanka Dhaqanka ee xididdada wadaniga ah ee St. Paul ayaa bilaaban doona soo gudbinta loogu talagalay saddexda cusub ee $25,000 Fellowships ee kuwa Dhaqanka siinaya qayb ka mid ah barnaamijka Fellowships Artist McKnight.
Wadashaqeyntan sanadlaha ah waxay qayb ka yihiin deeq-bixinta McKnight ee rubuc-saddexaad ee 2021, kaas oo guddigu ku abaalmariyay 131 deeq oo wadar ahaan ah $24.1 milyan. Lacagtaas, $6.3 milyan ayaa u kaalmeysay deeq -bixiyeyaasha barnaamijka Fanka & Dhaqanka, sida Xididdada Asaliga ah, iyada oo diiradda la saarayo sidii loo xoojin lahaa hal -abuurka, awoodda, iyo hoggaaminta fannaaniinta iyo kuwa dhaqanka qaada. Liiska buuxa ee deeqaha la oggolaaday ayaa laga heli karaa annaga keydka macluumaadka.
“Xididdada Asaliga ah waxay keenaan xiriir qoto dheer oo lala yeesho bulshooyinka kala duwan, dhaqannada awoowayaasha, iyo farshaxanka dhaqanka. Wadashaqayntaan cusub iyo daah -furka Shuraakada Dhaqan -wadayaasha ayaa u dabaaldegi doonta oo kor u qaadi doonta shaqada muhiimka ah ee dadka dhaqanku u qabtaan dadka iyo meeraha. ”
Wehelnimada cusubi waxay taageeri doontaa saddex dhaqan -dhaqe oo ku dhaqma hab -nololeedka muqaddaska ah oo bogsiiya oo wadaaga dhaqamada farshaxanka dhaqanka ee jiilasha. Saaxiibbadu waxay ka qaybqaadan doonaan koox kooxeed iyo goob bulsheed taas oo u oggolaan doonta inay si qoto dheer u baraan barashadooda la -taliyayaal oo ay si weyn u wadaagaan shaqadooda. Roots -ka asaliga ah waxay rajaynayaan inay ku dhawaaqaan saddexda qaataha ugu horreeya ee la sharfay Maarso 2022.
“Xididdada Asaliga ah waxay keenaysaa xiriir qoto dheer oo lala yeesho bulshooyinka kala duwan, dhaqannada awoowayaasha, iyo farshaxanka dhaqanka,” ayuu yiri Tonya Allen, oo ah madaxweynaha Mu’asasada. "Wadashaqayntaan cusub iyo soo -saarista Shuraakada Dhaqan -wadayaasha ayaa u dabaaldegi doonta oo kor u qaadi doonta shaqada muhiimka ah ee dadka dhaqanku u qabtaan dadka iyo meeraha."
"Shuraakada dhaqan -wadayaasha waa isku -dhafka riyooyinku inay miro -dhal noqdaan!" ayay tiri Mary Anne Quiroz, oo ah aasaasaha iyo agaasime ka mid ah xididdada asaliga ah. "Mu'asasada McKnight waxay ahayd lamaane muhiim u ah horumarka xididdada asaliga ah, iyo bilaabista Wada -hawlgalayaasha Dhaqan -qaadayaashu waxay ku dhisaan kalsoonida aan hore u dhignay."
Wax badan oo ku Saabsan Dhaqaleyaasha Dhaqanka:
Saaxiibbada dhaqanka xambaarsan ayaa si hal-abuurnimo leh ugu dhaqmi doona dhakhaatiirta, sheekooyinka, qoob-ka-ciyaarka (awoowayaashii ilaa hip-hop), sameeyeyaal (qalab, daabac, dhar, warbaahin isku dhafan), durbaanleyaal, iyo ilaaliyeyaasha luqadaha. Iyada oo ka duwan dhaqanka farshaxanka shaqsiyeed, dhaqan-dhaqameedka ayaa la fahamsan yahay in uu yahay dhaqan-nololeed buuxa, hab loo maro nolosha iyo muujinta dhaqanka oo ay ka mid tahay gudbinta barashada iyo ilaalinta aqoonta awoowayaasha.
McKnight's ku -darka dhawaan kuwa leh dhaqan ujeedka barnaamijka Farshaxanka & Dhaqanka waxay qirayaan inaan taageero siinno hoggaamiyayaasha hal -abuurka ee Minnesota dhaqammada aan isticmaalin erayga farshaxan (sida Dhalad Ameerika iyo Hmong), iyo sidoo kale kuwa udub -dhexaadka u ah gudbinta iyo ilaalinta jidadka dhaqanka.
Soo Dhaweyn diiran oo ku socota xididdada asaliga ah
Mu'asasada McKnight waxay ku faraxsan tahay inay ku soo dhaweyso xididdada asaliga ah bulshada dhexdeeda wada -hawlgalayaasha Farshaxanka Farshaxanka McKnight. Xididdada Asaliga ah waxay bixiyaan barnaamijyo dhaqan ahaan khuseeya, aqoon isweydaarsiyo, tababbarro, iyo kulanno si kor loogu qaado fayoobaanta, kor loogu qaado aqoonta asaliga ah iyo abtirsiinta, kobcinta hoggaaminta dhallinyarada, iyo kicinta isbeddelka bulshada iyada oo loo marayo fanka dhaqanka iyo firfircoonida.
Waxaa la aasaasay 2017, Roots Indigenous waa iskuduwaha iyo meel wada shaqayneed oo saldhigeedu yahay St. Paul kaas oo bixiya meelo la isugu imaan karo, istuudiyaha farshaxanka, iyo goob farshaxanka bulshada. Waxa kale oo ay siisaa taageero abaabul iyo ganacsi isbahaysiga fanaaniinta iyo kooxaha dhaqanka ee u heellan dhisidda, taageeridda, iyo kobcinta fursadaha Dadka Asaliga ah, Madow, Brown, iyo Dadka Asaliga ah.
Bishii Janaayo 2021, sii wadidda ballaarinta barnaamijka Farshaxanka Farshaxanka McKnight, McKnight wuxuu la xiriiray Roots Indigenous si loo sahamiyo horumarinta wehel cusub oo loogu talagalay in lagu taageero fannaaniinta ka go'an ilaalinta iyo horumarinta dhaqannada hal -abuurka ee Minnesota. Gugii, Roots -ka asaliga ah waxay la kulmeen dhaqan -yaqaannada iyo xubnaha bulshada si ay u naqshadeeyaan wehelnimada cusub oo ay u xoojiyaan taladooda soo jeedinta McKnight. Bishii Ogosto, guddiga McKnight wuxuu ansixiyay maalgelinta loogu talagalay Wada -hawlgalayaasha cusub ee Xambaarayaasha Dhaqanka. Fursadaha soo -gudbinta ee is -bahaysigan waxay si toos ah u socon doonaan Oktoobar 2021. Kalfadhiyada macluumaadka iyo gargaarka dheeraadka ah ayaa la heli doonaa laga bilaabo Oktoobar waxayna sii socon doonaan illaa waqtiga kama dambaysta ah ee soo -gudbinta ee Diseembar 2021.
Barnaamijka Farshaxanka Farshaxanka McKnight wuxuu Dhamaystiray Wajigii Ugu Dambeeyay ee Ballaarinta
Xirfadlayaasha Farshaxanka McKnight waxay kobciyaan hal -abuurka, hoggaaminta, iyo awoodda fanaaniinta Minnesota iyo kuwa dhaqan -wadayaasha ah. Shantii sano ee la soo dhaafay, Mu'asasada McKnight waxay ku dartay ku dhawaad $1 milyan oo taageero sanadle ah barnaamijka Farshaxanka Farshaxanka McKnight. Ballaarintan ayaa ballaarisay baaxadda barnaamijka; waxay bilaabeen wehel u go'an daabacaadda, fannaaniinta bulshada ku hawlan, fannaaniinta faybar, fannaaniinta buugga, iyo kuwa dhaqanka qaada; wuxuu ku daray lix wada -hawlgalayaal cusub; waxayna u abuurtay fursado degenaansho cusub dhammaan saaxiibbada McKnight. Iyada oo la bilaabayo Shuraakada Xirfadleyda Dhaqanka deyrtan, barnaamijka Farshaxanka Farshaxanka ee McKnight wuxuu sannad walba maalgelin doonaa 47 wehel oo ah $25,000 midkiiba, dhammaantoodna ku jira taageero aan xaddidnayn, oo loogu talagalay fannaaniinta iyo dadka dhaqanka ku leh Minnesota oo dhan.
Riix halkan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Xididdada Asaliga ah iyo halkan wixii macluumaad ah ee ku saabsan Fanaaniinta Farshaxanka ee McKnight.
Bishan, waan soo dhaweynay Ben Passer, sarkaalka sare ee barnaamijka ee kooxda Midwest Climate & Energy, iyo Dominic McQuerry, sarkaalka barnaamijka wadajirka ah ee la shaqeeya Vibrant & Equitable Communities iyo Midwest Climate & Energy barnaamijyada kooxda McKnight.
Waxaan sidoo kale raadineynaa Sarkaalka Barnaamijka Caalamiga ah ee cusub iyo laba Sarkaalka Barnaamijka Barnaamijyada Bulshooyinka Vibrant & Equitable. Riix halkan si aad u aragto dhajinta shaqada.